Ndị na -emepụta ngwaahịa - Factory Products China, Suppliers
S-usoro Butt fusion igwe ịgbado ọkụ
Hydraulic butt fusion welding igwe
Automatic anwụrụ ịgbado ọkụ igwe
Onodi kwesịrị ekwesị ịgbado ọkụ igwe
Igwe ịkpụ ọkpọ Bandsaw
Manual Pee anwụrụ ịgbado ọkụ igwe
Igwe ịgbado ọkụ Electrofusion
Igwe ịgbado ọkụ soket PPR
Ngwaọrụ na akwa akwa
SHD1200 Poly ịgbado ọkụ Machine
SHD500 Hdpe Pipe ịgbado ọkụ Machine
SHD450 igwe gbazere ịgbado ọkụ igwe
SHD160 Hdpe Pipe ịgbado ọkụ Machine
EF315 Igwe ịgbado ọkụ Electrofusion
Full Automatic HDPE Pipe ịgbado ọkụ Machine
S-usoro Butt fusion ịgbado ọkụ igwe S450 -S500-S630-S800-S1000
Akụrụngwa nke etiti igwe bụ aluminom ZL104, ọ dị nfe mana ọ siri ike, bụ otu n'ime ihe kacha mma maka igwe.
Ihe ndị bụ isi nke ngwa eletriki kacha mma bụ china, a na -esi na abroads ebubata ọtụtụ.
Ihe mkpuchi PTFE nwere ike ịwepụ ya na sistemụ njikwa okpomọkụ dị iche, enwere ike ịchịkwa ọnọdụ okpomọkụ ruo oke kacha nta.
S-usoro Butt fusion ịgbado ọkụ igwe S160 -S200-S250-S315-S355
Ngwa nke mchine frame bụ aluminium ZL104, ọ dị nfe mana ọ siri ike, bụ otu n'ime ihe kacha mma maka igwe.
SHD1000 Plastic Pipe Fusion ịgbado ọkụ Machine
Igwe ịgbado ọkụ SHD1000 HDPE PIPE dị mma maka ịgbado ọkụ PE PP PPR ọkpọkọ plastik, yana ịgbado ọkụ sitere na DN710mm ruo DN1000mm. A na -ejikarị ya arụ ọrụ ugbo, kemịkalụ, pipeline mmanụ na gas, ọkpọkọ mmiri, ọkpọkọ mmiri wdg.
SHDG800 Plastic Dabara Adụ Machine
Ụlọ ọrụ ịgbado ọkụ dabara adaba maka imepụta PE na -ebelata tee na ogbako. Dabere na imewe agbakwunyere, ọ bụrụ na ịgbadoro ụdị dị iche iche, naanị ị ga -achọ dochie ngwakọ kwekọrọ.
SHD355 Semi Automatic ịgbado ọkụ Machine
SHD355 Semi akpaka ịgbado ọkụ igwe nwere ike ịgbanye ọkpọkọ na akwa ya na ihe PE, PP na PVDF, na -arụ ọrụ n'ụzọ dị mfe ma dabara maka ọnọdụ ọrụ ọ bụla siri ike. Ọ mejupụtara okpokolo agba, akụkụ hydraulic, ngwa ọrụ, efere kpo oku, nkwado maka ngwa mkpuchi & efere kpo oku, yana akụkụ nhọrọ.
SHD200 maka HDPE Pipe site na ọrụ hydraulic, nha dị site na DN63-200mm, ịdị elu dị elu, oge ọrụ na-adịgide adịgide, ọnụ ahịa asọmpi asọmpi, ngwaahịa dị & nnyefe ngwa ngwa dị.
SHD250 Pee ọkpọkọ ihe
Igwe ịgbado ọkụ SHD250 dị mma maka ịgbado ọkụ PE PP PPR ọkpọkọ plastik n'ụdị niile. A na -ejikarị ya arụ ọrụ ugbo, kemịkalụ, mmanụ na gas, ọkpọkọ mmiri, ọkpọkọ mmiri wdg, n'ihi uru nke obere na obere ọrụ.
SHD315 Isi Fusion ịgbado ọkụ Machine
Kwesịrị ekwesị maka ịgbado ọkụ ọkpọkọ plastik na akwa akwa sitere na PE, PP & PVDF. A ga - eji ihe alumini mee ya. Na -agụnye Ngwá Ọrụ Atụmatụ, Efere ọkụ, Okpokoro Ntọala, Ngalaba Hydraulic na Nkwado.
A kwadebere igwe ahụ na mwekota isi anọ nwere mgbachi nke atọ axially kpaliri ma gbanwee. Mbughari PTFE ntekwasa kpo oku efere na iche iche okpomọkụ akara usoro.
SHD500 Hydraulic ụdị HDPE butt fusion ịgbado ọkụ igwe nwere ngalaba hydraulic, nke nwere ike inye ike & nrụgide hydraulic kwụsiri ike na nrụgide n'oge planing elu, agbaze, nke nwere ike ijide nsonaazụ ịgbado ọkụ zuru oke, site na izere ọdịda nke ịgbado ọkụ nke nrụgide na -akwụghị chịm n'oge usoro ịgbado ọkụ.
Mana igwe ịgbado ọkụ Fusion, igwe ịgbado ọkụ Hotmelt, igwe ịgbado ọkụ hydraulic butt hydraulic butt. Igwe ịgbado ọkụ hydraulic butt, HDPE butt fusion machine. Igwe ịgbado ọkụ. Ngwa Ngwakọta Ngwakọta Butt. HDPE Pipe Joint ịgbado ọkụ Machine, Pipe Jointing ịgbado ọkụ Machine, Poly ịgbado ọkụ igwe. Plastic anwụrụ Fusion ịgbado ọkụ igwe.